Yonke into ekufuneka uyazi malunga neentlanzi zeFanfin okanye idemon yolwandle | Ngeentlanzi
Ngaphambili sabhala ngentlanzi engaqhelekanga ehlala ezinzulwini zolwandle ezaziwa njenge umonfish. Namhlanje sibuya nenye intlanzi enqabileyo ukongeza kuluhlu lwethu lweentlanzi ezinqabileyo.
Imalunga nentlanzi yeFanfin okanye yaziwa ngokuba yidemon yolwandle. Le ntlanzi, njenge-monkfish, kuba zilandelelana, zihlala ezinzulwini zolwandle, ngaphezulu okanye ngaphantsi malunga neemitha ezili-1.000 XNUMX (Ukufikelela kubunzulu beemitha ezingama-3.000 XNUMX), ezizezentsapho Caulophrynidae ukuyalela Iifophi kwaye yintoni enako fikelela kwi-25 cm ngaphandle kokubala i-filaments zayo ezinkulu kunye nee-eriyali. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngale ntlanzi ingaqhelekanga?
1 Intlanzi yeFanfin okanye idemon yolwandle
2 Iimpawu zentlanzi yeFanfin
3 I-fanfin yeentlanzi zesini
Intlanzi yeFanfin okanye idemon yolwandle
Iintlanzi zolwandle olunzulu aziqhelekanga kwaye zinee-morphologies ezingaqhelekanga kakhulu kumanzi anzulu kuba kufuneka zivumelane nazo iindawo apho kukho ukukhanya okuncinci okanye akukho siganeko senzekayo. Imisonto emikhulu kunye neempondo zikhonza iintlanzi ukuba zikwazi ukuhamba kwiindawo ezinzulu zenzonzobila ngaphandle kwesidingo sokukhanya.
Ubizwa ngokuba yidemon yolwandle ngenxa yenkangeleko yakhe eyoyikekayo. Njenge-monkfish, intlanzi iFanfin inembonakalo engathandekiyo, kwaye iyingozi. Unokuthi uyindlavini evela enzonzobileni.
Le ntlanzi ibonakaliswa ngokuba yinxalenye ye Iintlanzi. Ezi ntlanzi zezi zibonakaliswa yi-pelagic kunye ne-benthic. Oko kukuthi, ziintlanzi ezinakho ukuhlala hayi kude kakhulu kumphezulu kwaye, zona, zihlala kwiindawo ezinzulu.
Iimpawu zentlanzi yeFanfin
I-Fanfin yintlanzi enkulu yezilwanyana zaselwandle kwaye ihlala ezinzulwini zolwandle lwePasifiki, eIndiya naseAtlantic. Ukuze ikwazi ukuzingela ixhoba layo inayo ilungu le-bioluminescent lokusebenzisa njengesithiyelo. Njenge-monkfish, eli lungu livela njengesiphumo sokudibana kunye neebhaktiriya ezikwaziyo ukudibanisa izinto zeekhemikhali ezenza i-bioluminescence. Iimpawu ze-monkfish kunye neFanfin fish ziyafana kakhulu, kuba zezolungelelwano olufanayo Iifophi.
Le ntlanzi kufuneka ilungiselelwe ukusinda kwindawo enelanga kunye nokutya okuncinci. Kukho iintsalela zeentlanzi ezifika elwandle zitsalwe ngumxhuzulane, kodwa azonelanga ukondla ezi ntlanzi. Enkosi kwiimpondo zazo kunye nakwimisonto, iFanfin yentlanzi bayakwazi ukubona i-morphology yommandla wezo ndawo zinzulu apho kungekho kukhanya.
Ngokubhekisele kwilungu le-bioluminescent, ayisebenzisi ukuzikhanyisa njengethotshi, kodwa endaweni yoko ilisebenzisa njengomtsalane wexhoba. Iintlanzi zibona ukukhanya ebumnyameni kwaye ziphelela ekukhokeleni kubo. Xa ixhoba lisondele ngokwaneleyo kwintlanzi yeFanfin, iyakukwazi ukuyifumana ngenxa yemisonto kunye neempondo zokuyihlasela nokuyitya.
Le ndlela yobomi entsonkothileyo apho kungekho zondlo, akukho photosynthesis okanye iplankton evumele esi silwanyana ukuba siphuhlise i-morphologies ethile (enjengee-eriyali, imisonto kunye nelungu le-bioluminescent) ukuze siphile kwaye siqhelane. Ezi ntlanzi kufanelekile ukuba zazi kwaye zifundwe kuba ubunqabileyo bazo bunokusinika ulwazi oluninzi malunga nendlela yobomi phaya ezantsi enzonzobileni.
I-fanfin yeentlanzi zesini
Indlela yokwenziwa kwakhona kweentlanzi iFanfin inomdla kakhulu. Bazala kwakhona nge-dimorphism yesondo kwaye iyagxininiswa. Ithetha ukuba ukuba inkunzi nemazi zahluke kakhulu. Njengakwiindidi ezininzi zezilwanyana, inkunzi incinci kakhulu ngobukhulu kunemazi (umzekelo, oku kwenzeka kwizikrelemnqa).
Ngexesha lesigaba sombungu, abesilisa nabasetyhini bahlala ngokukhululekileyo, kodwa xa befikelela ekukhuleni, njenge-monkfish, abesilisa baba zizidleleleli zabantu ababhinqileyo. Amadoda aba lilungu nje lokwandiswa komfazi kwaye angamonakalisa.
Isizathu sokuba ezi ntlanzi zibe nale ndlela yokuphinda zivelise kungenxa yokuba enzonzobileni kunzima kakhulu ukufumana iqabane. Ngale ndlela, xa inkunzi nemazi izalana, indoda iyaqiniseka ukuba ayilahlekelwa ngumfazi iba sisidleleli njengenxalenye yomzimba wayo.
Olu sapho lweentlanzi alukho njengemfuno ye-monkfish kwi-gastronomy ngenxa yemisonto kunye neempondo. Nangona kunjalo, ichaphazeleka nefuthe lotshintsho lwemozulu njengokunyuka kwamaqondo obushushu amanzi okanye i-asidi.
Njengoko ubona, iintlanzi zolwandle zibalasele kwaye zikhetheke ngenxa yeemeko zokuphila ezinzima. Ukongeza, kusekho iintlobo ezininzi zeentlanzi kunye nezinye izinto ezingaziwayo ngenxa yobunzima ekufumaneni iindawo ezinzulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Idemon yolwandle